Awekho ama-Gauges ku-777-200ER ngemva kokulanda iphakheji eliphelele.
Umbuzo Awekho ama-Gauges ku-777-200ER ngemva kokulanda iphakheji eliphelele.
unyaka 1 4 edlule #794 by inkantolo
Ngemuva kokufaka i-7770200ER ku-FSX yami, ama-gauge asuke alahlekile ku-cockpit kanye ne-cockpit yangempela.
unyaka 1 4 edlule #795 by Dariussssss
Iphutha eyaziwa kakhulu. Udinga ukufaka ithuluzi lokubuyisela i-Gauges. Ungayithola lapha eRiooooo. Kuyinto isifaki ngakho, konke kuhamba kalula.
Umsebenzisi alandelayo (s) wathi Thank You: inkantolo
unyaka 1 4 edlule #798 by inkantolo
I "Ithuluzi Lokubuyisela I-Gauges" alizange lisize ngenkinga. Ngicabanga ukulayisha kabusha i-777-200ER noma mhlawumbe yonke i-FSX.
Isikhathi ukudala page: 0.236 imizuzwana